scal-pasi Hajj mafambiro anotanga muSaudi Arabia - teles achidana
scal-pasi Hajj mafambiro anotanga muSaudi Arabia
PRESS REVIEWpasi rose
Hondo yegore negore yeHajj inoitwa nemaMuslim pasi rese yakatangira muSaudi Arabia, yakaderedzwa zvakanyanya nekuda kwekoronavirus.
Vashanyi vedzimwe nyika varambidzwa kuenda kuMecca kuyedza kudzivirira denda.
Vafambi vanosvika zviuru gumi chete vanotarisirwa, vachienzaniswa nevatenderedza mamirioni maviri.
Vazhinji vazhinji vanowanzobva kunze kwenyika, asi gore rino chete vatorwa vanobvumidzwa kutora chikamu ndevaya vanogara muumambo.
Vatori vechikamu vakaongororwa kupisa uye kuongororwa hutachiona pavakasvika kuMecca pakupera kwevhiki, AFP inhau inotaura.
Vakatendeka vanofanirawo kugara pachavo musati mapedza uye mushure meiyo nzendo. Masks echiso anozove anomanikidzwa nguva dzose.
Nhoroondo yevhidhiyoGore rakapera, Anisa akarasikirwa naamai vake, basa rake uye imba yake uye akatarisira kuti Hajj yaizomubatsira kuwana nyaradzo.
Muhurukuro svondo rino nemubatsiri weSaudi Arabia TV, Saudi Arabia, gurukota rezvemaPilgrimages, Mohammed Saleh Binten, vanoti vafambi vakagadziriswa kudzimba dzavo mazuva mashoma mana apfuura ekugadziriswa mumahotera mumahotera Makka.
Mabhuku: iyo nyaya yebofu reBafia, kukanganisa kwakaipa ...
Humambo hwanyora zvinopfuura zviuru makumi maviri nemana nemazana mana ezviuru nerufu dzinosvika zviuru zvitatu, imwe yedenda rakakura kwazvo mu Middle East.
Nyika yakasimudza chete kuvharika kwenyika mwedzi wapfuura . Kurambidzwa kwakaomarara kuderedza kupararira kwehutachiona kwakatanga kushanda munaKurume, kusanganisira maawa makumi maviri nemana ekuvharirwa mumaguta mazhinji.
Chii chinonzi Hajj?
Nhoroondo yevhidhiyoVaMuslim pasi rese vanoita Hajj gore rega rega muMecca, Saudi Arabia
Kugadzira rwendo rwekuenda kamwe kamwe ndeimwe yetembiru shanu dzeIslam - zvisungo zvishanu izvo muMuslim wese, uyo ane hutano hwakanaka uye achikwanisa kuzviita, anofanira kuzadzisa kuitira kuti ararame hupenyu hwakanaka uye hune mutoro, zvinoenderana ne ChiIslram.
Kaaba, huru-yakavezwa yakaita sekeke muGrand Mosque yeMecca inoonekwa nemaMuslim senzvimbo inoyera Pasi pano, yakakomberedzwa nemapoka anorumbidza Allah neChitatu.
Mamwe mabasa ekunamata anozoitwawo sevapfuuri kumutsiridza pfungwa yavo yezvinangwa munyika.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53571886
Gunman anopururudza anomhura mumatare